Tena ilaina ny fanavaozana an'i Shina.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Tena ilaina ny fanavaozana an'i Shina
Ilaina tokoa ny fanavaozana ny fanavaozana ny indostria
Ao amin'ny Delta renirano Pearl, miavaka be ny toekarena fambolena indostrialy Zhongshan. Tamin'ny 2007, ny famokarana indostrialy Zhongshan dia nitahiry mihoatra ny sandan'ny famokarana indostrialy an-tanàna 70%.
Andiana indostrialy marobe ao Zhongshan amin'ny indostrian'ny jiro no indostria nentim-paharazana lehibe, Zhongshan, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "renivohitry ny jiro China". Ny ankamaroan'ny cluster ataon'ny indostrian'ny jiro, tanànan'ny guzhen, orinasa mifandraika amin'ny jiro eo an-toerana mihoatra ny orinasa 5.000, izay mampiasa olona mihoatra ny 100.000, dia mahatratra 16 miliara yuan.
Na izany aza, ny famokarana jiro, ny vokatra jiro, taloha dia indostria miasa mafy, tsy avo ny votoatin'ny teknolojia ary ny vokatra misy vidiny, ny fanavaozana ny cluster indostrialy dia maika. Ny sekretera lefitry ny komity monisipaly Zhongshan, Li Qihong, ny ben'ny tanàna dia nilaza tamin'ny mpanao gazety: "Zhongshan no hany tanàna fanavaozana ny cluster indostrialy ao amin'ny faritanin'i Guangdong. Ny tanàna fitantanana teo aloha ho an'ny fametrahana ny sampahom-indostrialy dia tokony hanohana orinasa lehibe sy ny indostrialy lava misy ny lanja. rojom-baravarankely.Raha misy ny fanavaozana ny jiro amin'ny cluster indostrialy manatsara ny faritra 'mpisava lalana', ny indostrian'ny jiro guzhen dia tsy maintsy manatsara ny vokatra misy ny rojom-bolo, ny fifanarahana teknolojia, ny marika isam-paritra, ny indostria manohana ivon-toerana fanavaozana feno, ivon-toeram-pizarana ary fanavaozana hafa ho lasa ivon-indostrialy manan-kery sy mifaninana . â €
"Ny fahatongavan'ny krizy ara-bola, nisy fiatraikany tamin'ny indostrian'ny trano sy tany, ny jiro guzhen koa dia niantraika kely ihany koa, nanatsara ny fanavaozana sy ny fanavaozana ary nanatsara ny fifaninanana samirery."
:Vokatra LED jiro hiditra amin'ny tsenan'i Japon